PDF version for who does not have Burmese font ဤကမ္ဘာပေါ်၌ ဘာသာရေးမြောက်များစွာရှိသည်။ ဘာသာတိုင်း၌ အချက်ကြီးသုံးချက်ရှိသည်။ ၄င်းတို့မှာ
(ဂ) ကျင့်ကြံခြင်း (Ethics) များဖြစ်ပါသည်။ ခရစ်ယာန်ဘာသာရေးဟူသမျှ၌ အထက်ပါအချက်များ ရှိစမြဲဖြစ်သည်။ ခရစ်ယာန်ဘာသာရေး တစ်ခုစီ၌ အထက်ပါ အချက်များအပေါ် ဦးစားပေးခြင်း မတူညီကြပါ။ တစ်ချို့သည် ယုံကြည်ခြင်း (Doctrine)၊ တစ်ချို့သည် ကိုးကွယ်ခြင်း (Rites) နှင့် တစ်ချို့သည် ကျင့်ကြံခြင်း (Ethics) တစ်ခုခု ဦးစားပေးတတ်ကြပါသည်။ သို့ရာတွင် တစ်ခုကိုမျှ ပစ်ပယ်၍မရပါ။ အထက်ပါအချက်များအနက် တစ်ခုခု မပါရှိပါက ဘာသာရေးမဟုတ်တော့ပဲ၊ စဉ်းစားဥာဏ် (ideology) တစ်ခုခု၊ သို့မဟုတ် တွေးတော ဆင်ခြင်ခြင်း (Philosophy) တစ်ခုခု ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ သို့ဖြစ်၍ ခရစ်ယာန် အသက်တာ၌ အထက်ပါ အချက် (၃) ချက်ကို လိုအပ်ပါသည်။ သမ္မာကျမ်းစာကလည်း အထက်ပါ (၃) ချက်ကိုပင်သွန်သင်ထားပါသည်။ ဤသို့ဆိုသော် ခရစ်ယာန်များ “ကျင့်ကြံနေထိုင်ခြင်း” (Ethics) အတွက်ဘာများ သွန်သင်ထားပါသနည်း? ဤမေးခွန်း၏ အဖြေကား “တောင်ပေါ်တရားတော်” သာလျှင်ဖြစ်သည်။ ခရစ်ယာန်များ၏ အသက်ရှင် နေထိုင်ကျင့်ကြံနိုင်ရေးကို ဤနေရာ၌ ဖော်ပြထားပါသည်။
This entry was posted on June 17, 2011 by thawngno in Articles Christian Life, Rev. Dr. Simon Pau Khan En and tagged Rev. Dr. Simon Pau Khan En.	Shortlink